Erdogaan oo Socdaal Kedis ah ku tagay dalka Tuunis xilli Turkigu uu ciidan udirayo Liibiya.
Wednesday December 25, 2019 - 16:13:20 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha dowladda Turkiga ayaa booqasho lama filaan ah ku tagay wadanka Tuunis oo daris la ah dalka Liibiya oo uu ka socdo dagaal ay isku hayaan dowlado kala ujeeddo ah.
Wafdiga Erdogaan oo ay kamid yihiin wasiirkiisa arrimaha dibadda, wasiirka difaaca,taliyaha sirdoonka iyo wasiirka isgaarsiinta ayaa qasriga madaxtooyada Qurdaajah kulamo kula leh Qeys Saciid oo ah madaxweynaha Tuunis.
Ilo wareedyo ayaa usheegay warbaahinta in socdaalka Erdogaan ee Liibiya uu salka ku hayo sidii dowladdiisu ay taageero dhan walba ah usiin laheed xukuumadda Alwifaaq ee wadanka Liibiya kajirta taas oo dagaal ba'an kala kulmaysa Khaliifa Xaftar oo taageera ka helaya dowlado shisheeye.
Barlamaanka Turkiga ayaa lafilayaa in isbuuca soo socda uu ansixiyo qaraar cusub oo ogolaanaya in ciidamo Turki ah lagu daad gureeyo wadanka Liibiya si loo difaaco xukuumadda ay aqoonsantahay waxa loogu yeero beesha caalamka.